Backlinks स्कोर निर्धारण गर्ने तरिकाहरू के हो?
यो लेख लिंक गुणको विषयमा समर्पित छ. हामी कसरी आगमन आगमन लिङ्कको गुणस्तर निर्धारण गर्दछ र कसरी तपाईंको लिङ्क निर्माण अभियानमा लिङ्कको गुणस्तर निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौं. यी खोज इन्जिन अनुकूलन पहलुहरू गुणस्तर लिङ्क प्रोफाइल सिर्जना गर्न आधारभूत छन्. तपाईंको साइटमा गुणस्तर लिंक रस प्राप्त गर्ने थुप्रै फाइदाहरू छन्. सबसे पहिले, तपाईं आफ्नो ब्रान्ड प्राधिकरण मा आफ्नो बजार आला र सामान्य मा वेब मा बढाएगा. यसबाहेक, पछाडीको पछाडिको लिंकले तपाईंको साइटमा लिङ्कको रस पाउँछ. यदि तिनीहरू उच्च प्राधिकरण वेब स्रोतहरूबाट आउँछन् भने, उनीहरूले तपाइँको वेब पेजको रैंक बढाउन र धेरै नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छन्.
यो आवश्यक छ कि तपाईंको साइटमा लिङ्कहरूको गुण थाहा पाउनुहोस् किनभने यी ब्याकलिंकहरू एक फाइनान्स कारकको रूपमा सेवा गर्छन् र या त खोज परिणाम पृष्ठमा तपाईको साइट रेटमा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंको सबै SEO प्रयासहरू विनाश गर्न सक्नुहुन्छ।. हाम्रो दिनमा, सबै ब्याकलिङ्कहरू समान रूपमा उपचार गरिँदैन. त्यहाँ धेरै स्प्यामरहरू र धोखाधडीहरू छन् जुन खोज इञ्जिन खेल गर्न प्रयास गर्छन् र फरक फरक लिङ्कहरू लिने प्रयास गर्दैनन्. बरु वेब पृष्ठमा इंगित बाह्य लिङ्कहरूको संख्या मात्र गणना गर्नुको साथै Google ले आउने लिङ्कहरूको गुणस्तरको मूल्यांकन गर्दछ. थप ठीक छ, Google ले तपाईंको लिङ्कमा सबै लिङ्कहरूको खाता अधिकार, प्रासंगिकता, स्थिति र सम्पादकीय प्रकृतिमा लिन्छ.
यही कारणले तपाइँलाई लिंक सम्भावनाहरूको सावधानीपूर्वक जाँच गर्नु आवश्यक छ किनकि खराब लिङ्कहरूले तपाइँका ब्रान्ड प्रतिष्ठालाई चोट पुर्याउन र रैंकिङमा गिरावट ल्याउन सक्छ।. Google ले वेब स्रोतहरूलाई दण्ड दिन्छ जुन कम गुणस्तर, स्प्यामी लिङ्कहरूसँग यसको वेबमास्टर दिशानिर्देश उल्लङ्घन गर्दछ. यसैले यदि तपाईंले केहि गरीब गुणस्तर आउने लिङ्कहरू देख्नुभएको छ जुन तपाइँको साइटमा पुग्नुहुन्छ, तपाईले Google Disavow उपकरणलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तिनीहरूलाई खोजी खोजी बिन्दुहरू र प्रयोगकर्ताहरू दुवै उपलब्ध गराउनु पर्छ।.
आउनुहोस्, हामीलाई केही तरिकाहरू छलफल गर्नुहोस् जुन Google ले ब्याकलिङ्क स्कोर निर्धारण गर्न प्रयोग गर्दछ.
पहलहरू जुन Google द्वारा खातामा लिइएका छन् पछि ब्याकलिङ्कहरूको स्कोर निर्धारण गर्दा.
डोमेन प्राधिकरण, पेज प्राधिकरण र पेजरङ्क
आगमन लिंक को गुणस्तर निर्धारण को सबै भन्दा महत्वपूर्ण कारक मध्ये एक को वेब स्रोत को प्राधिकरण हो तिनीहरू आउँछन्. PageRank मोडेल लिङ्क इक्विटी र लिंक प्रवाहमा आधारित छ. साइटको अधिक प्राधिकरण, अधिक मूल्यवान लिङ्क जुन जुन तपाईले ब्याकलिङ्क मार्फत प्राप्त गर्नुहुनेछ.
होमपेज वा वेब स्रोतको प्राधिकरणको गणना गर्न, तपाईं Semalt वेब विश्लेषक वा मोज उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।. यी उपकरणहरूको मद्दतको साथ, तपाईंले वेबसाईटको डोमेन प्राधिकरण र पृष्ठ प्राधिकरण निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ. प्रत्येक दिइएको URL को लागि, तपाईले 1 देखि 100 बाट अंक प्राप्त गर्नुहुनेछ. यी मेट्रिकहरू उच्च छन्, अधिक मूल्यवान लिङ्क हो.
यसबाहेक, तपाईं आभारी SEO सफ्टवेयर प्रयोग गरी आगमन लिङ्कको प्राधिकरण जाँच गर्न सक्नुहुनेछ. यो सफ्टवेयरले तपाईँलाई यस्तो मेट्रिक्स "ट्रस्ट प्रवाह" र "उद्धरण प्रवाह" प्रदान गर्नेछ. "एउटा जटिलमा, यो मापदण्डले तपाईंलाई यूआरएलको लिंक प्राधिकरण देखाउनेछ. यी दुवै मेट्रिकहरू उच्च छन्, यस साइटको बहुमूल्य लिंक हो.
सामाग्रीको टुक्रा वा वेब स्रोत
Google यी दिनहरूमा अधिक बुद्धिमानी हुन सक्छ र सजिलैसँग कसरी वेबसाईटको इनबाउन्ड लिङ्कमा प्रासंगिक हुन सक्छ जुन यसमा राखिएको छ. यो Google प्राथमिक उद्देश्य द्वारा न केवल उच्च गुणस्तर प्रदान गर्नका लागि तर प्रयोगकर्ताको क्वेरी खोज नतिजाहरूको अधिकतम रूपमा प्रासंगिक रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ.
Google ले यसको इनबाउन्ड लिङ्क मार्फत वेब स्रोतको सामरिक सम्बन्धको मूल्यांकन गर्दछ र यी लिङ्कहरूको लंगर पाठहरू. यसैले तपाईंलाई तपाईको लंगर पाठको प्रासंगिकतामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ. तपाईंको लिङ्कको लागि पाठ लन्क रूपमा तपाईंको ब्रान्ड नाम वा उच्च-भोल्युम कीवर्ड प्रयोग गर्नुहोस्.
प्रासंगिक वेब स्रोतहरु बाट ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने जुन तपाईंको आफ्नै डोमेनको विषयसँग मेल खान्छ जुन विशेष खोज सर्तहरूको लागि तपाईंको साइट रैंकिङ स्थिति बढावानेछ। Source .